Sacuudiga Oo Cambaareeyay Weerarkii Ismiidaaminta Ahaa Ee Shalay Ka Dhacay Muqdisho – somalilandtoday.com
(SLT-Riyadh)-Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sacuudiga ayaa lagu cambaareeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay lala eegtay ciidan ka tirsan Midowga Yurub oo u dhashay dalka Talyaaniga.
Maalinti shalay ayeey aheyd markii gaadhi yar oo kuwa raaxaada ah lagana soo buuxiyay walxaha qaraxa lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamo Talyaani ah agagaarka wasaarrada Gaashaandhigga Soomaaaliya.
Weerarka waxaa ku nafwaayay in la ogyahay Laba qof oo mid ka mid ah uu ahaa qofkii weerarka Ismiidaaminta ah geystay. halka ay ku dhaawacmeen 10 kale oo ay ku jiraan arday xilligaasi ka timid iskuulaadkooda waxbarasho.
Al-shabaab oo sheegtay mas’uuliyada weerarkan ayaa afhayeenkooda Cabdicasiis Abuu Muscab waxaa uu sheegay in ay weerarka ku dileen ilaa afar sarkaal oo ka tirsan ciidamadii la socday kolonyada la weeraray.
Sacuudiga ayaa ugu dambeyn sheegay in uu kordhin doono taageerada Millatari iyo mida dhaqaale ee uu siiyo dowladda Soomaaliya.